Bikro Jabinta Gabadha Yar
Xaax, Xaax, Xanuun kale ha ugu sii darain!!!.
Raaxada Guurka: Aqalgalka (Qeybta 2-aad)
Araar: Aqoon wadaag, Ceeb ma ahan. Waxaa jiro Gabdho ku dhasho iyaga oo aan Bikro aheeyn oo tiro ahaan yar, taa oo Dadka aan aqoon shaki galin karto, Gudniinka Labaad kuwaa waxa uu u yahay wanaag.
Bikra Nimadu waxa ey u tahay Haweenka Sharaf. Diimaha oo dhami ma ogol Galmada ka horeeyso Guurka. Kawaa oo ogolaanayo in Naagahu ey baneeyaan Xudunta iyo Caloosha qaar ka mid ah, marka ey u khidmeeynayaa wadaadada Budaha taa oo markii dambe u noqotay Caddo dhaqameed. Bikro in ey ahaadaan muhim ma ahan, Laakin waa in eyna wax dhalin.
Taa oo Ceeb nagu ah in wixii ey noo sheegaan aan sharciyeeyno, hilmaanana Shuruudaha Islaamku na farayo. Islaamku sida uu u xurmeynayo Haweenka, Ninka xaaraan ku Bikra jabiyo Gabar xaaladaha qaar, Islaamku waxa uu ku xakumaa Dil, taa oo ah Ciqaabta ugu weyn ee Qof Bini aadan ah lagu ciqaabo iyada oo la dhowrayo Sharafka Haweenka. Ogoow in ey jiraan Gabdho dhashay iyaga oo aan leheeyn Xuubka Hayman ee Bikrada, waqtiga Bikra jabintana dhiig kama yimaad, haku ceebeeyn Adiga oo aan hubsan Cilmi ahaan.
Xanuun badan ayeey ka soo mareen Haweenku Gudniinka si loo sugo Bikranimadeeda F. S: waxaa ey sugeeysay Xanuun kale oo ah Bikro Jabinta sharciga ah, taa oo ey ugu dul qaadneeysay, Sharfka iyo in ey Hooyo Noqoto.
Inkaar qabe, Haween kufsade, waxaad baabinee Mustaqbalka Qof dhan. Bikra nimadu waa sharaf lagu xushmeeyo Gabdhaha Mujtamacyada oo dhan.
Kufsigu Jirhaan iyo Nafsi ahaanba waxa uu ku reebaa Xanuuno joogta ah. Beryahaan waxaa ku soo batay Dalkeena Somaliya kufsi Saqiira suujis ah, Haweeneydu uma adkeeysato Xanuun kufsi oo sharaf dhac u keeno. Kufsiga Xoogga ah ayaa keena in ey is disho iyada oo ceeb ka cararee ama u dhimato xanuun ama ka qaado Cudur Nafsi ah sida waalida. Bikranimada Raggu ma ahan muhim, Jir ahaanna lama Cadeeyn karo. Saad weey walacee, Uur qaadee, nuujinee, Korinee, caruurteeda hortooda haku karaama tirin, kaligeed ayeey korinee, laga yaabee in aan loogu kaalmeeyn.
S: Allaah ayaan ka magan galnee, laga yaabee in Caruurteeda qaar ey ku caasiyaan Hooyada, kuwaa caasiyay Ciqaabtooda Allaah ayaa noo sheegay. Haweenka xaqooda haloo dhoowro sida Diinteenu na faree.
Xaax, Xaas inkaar qabe kufsigu waa xaaraan. Wixii aan ka khalday iga sax, wixii ka dhimanna ku dar. Qore: Yahya Amir.
Waanad ogsoon tihiin halkay iiga taallo, waxaanan doonayaa inaan haddeer u guri geeyee, gabadhii waa taase dhisa. Waxaa weliba habboon in ninka xaaskiisa loo aqalgeliyo habeenkii kolkay dunidu degto dadkuna jabaqda dhigo.
U noqo dhul, samo hakuu noqdee. U noqo dhab, udub dhaxaad ha kuu noqdee. U noqo jaariyad, addoon ha kuu noqdee. Ha isku nabin yaanu ku nicine, hana ka fogaan yaanu ku hilmaamine. Hadduu kuusoo dhowaado u dhowow, hadduuse kaa meero ka fogow.
Ilaali sankiisa, dhegihiisa iyo indhihiisa. Yaanu kaa urin udug mooyee, yaanu kaa maqal hadal mac mooyee, yaannuna kaa dhugan dhalaal iyo qurux mooyee. Nolol aanu boos uga bannaaneyn hooyadaa, aabbahaa, iyo walaalahaa toona.
Waxaad noqoneysaa xaas uu qabo nin aan dooneyn inay cidi kula wadaagto, xitaa hadday ciddaasi ahaan lahayd kuwii ku dhalay iyo kuwii kula dhashay. Gaarsii heer uu aamino in aanay cid aan adiga ahayni jirin, mar kastana xusuusnow inuu nin kasta yahay carruur caga weyn, hadal macaan kan ugu yarina uu ka farxinayo. Yaanu kaa dareemin murugo iyo in guurka uu ku guursaday aawgii aad reerkaagii uga soo fogaatay, illayn isaguba waxa uu ka soo tegay gurigii aabbihii iyo reerkiisiiye.
Ha yeeshee farqiga idiin dhexeeya adiga iyo isagu waa uun farqiga u dhexeeya nin iyo naag oo naagi mar waliba waa ay ka beer jilcan tahay kagana xiiso badan tahay ninka xagga waalidkeed iyo gurigii ay ku dhalatay, ku barbaartay waxna ku baratay. Waa inaad la qabsataa nolosha cusub iyo ninka cusub oo laga billaabo maanta noqday ninkaagii iyo carruurtaada aabbohood. Ku oran maayo iska illow aabbahaa, hooyadaa iyo walaalahaa, haddaad adigu illowdana iyagaanba ku illoobi karin, waxanse kaa codsanayaa in aad ninkaaga jeclaatid, isu qurxisid, isagana u joogtid, weligaana maandhey iska ilaali masayr haddii kale furriin meel kuuma jiro.
Ha farxin isagoo murugeysan, hana ismurjin isagoo faraxsan. Marka aan leeyahay fikrad kama wado tijaabooyin hore oo ay soo martay, balse waa fikrad cilmiyeed la soo baray loogana soo sheekeeyay. Waxaa dhacda inay hablaha qaarkood ka baqaan inayba kala dillaacaan habeenkaasi.
Bekra-jebinta waxaa la socda xanuun yar oon micne lahayn, watana macaan illowsiisa cabsida oo dhan. Waxaan oran karnaa maba jiro wax xanuun lagu tilmaami karaahi haddii aynaan annagu arrinka buunbuuninayn, siinaynna ahmiyad ka weyn tan uu mudan yahay.
Waxa waajib ku ah gabadha inay isugu diyaariso guurka si qalbi furnaan leh, sababta oo ah habeenka aqalgalku waa hadafkeeda koowaad waxaana ku xiran mustaqbalkeeda oo dhan. Gabadha si wanaagsan u xulatay gacalkeedu maba aha inay cabsato, balse waa inay si kalsooni ah xabadkiisa isugu tuurtaa una dhunkataa iyada oo u diyaar garoobeysa inay la midowdo laga billaabo saacaddaasi ilaa iyo intay nooshahay. Dabcan gabadha caynkaasi ah ee farxad iyo laab furnaan ku soo dhoweysa habeenkeedu way hilmaantaa xanuunka aan wax la sheego lahayn ee la socda bekra-jebinta.
Waxaa waajib ku ah ninka inuu habeenkaasi ula dhaqmo gacaladiisa sidii qof martiya oo kale uusanna ula dhaqmin sidii naagtiisa, sababta oo ah ahmiyadda nafsiyadeed ee habeenkaasi leeyahay baa ka weyn tan jinsiyeed. Waxaa ninka looga baahan yahay inuu bixiyo wax ka badan inta uu qaadanayo, waana in uusan ka fekerin raaxadiisa balse u qaato in habeenkaasi yahay habeen imtixaan xaddidaya mustaqbalka iyo aayaha dambe ee la dhaqanka haweeneydiisa, iyada oo habeenkaasi ka qaadanaysa fikrad heerka ay gaarsiisan tahay raganimada ninkeedu, kalana hubsanaysana in ay u dhabowday riyadii ay ku taami jirtay iyo inay khasaartay.
Amarka ugu horreeya ee ay habboon tahay inuu ninku xaaskiisa cusub siiyaa waxa weeye inay laba rakco oo salaad ah ku xirato, ayna ku ducaystaan in Ilaah isu barakeeyo, carruur khayr qabtana kala siiyo. Sidaasi bay labada isqabaa ku dareemaan in ulajeeddada ugu weyn ee guurku aanay ahayn galmo iyo raaxaysi, balse ay tahay gudasho waajib diini ah iyo dhalid carruur dadkooda iyo dalkooda anfacda.
Sidaas bayna Diinteenna Islaamku niyadda ugu dhisaysaa labada qof habeenka aqalgalka, ugana dhigaysaa macaanta hawsha habeenkaasi cibaado. Ninka habeenka aqalgalka waxa waajib ku ah inuu ka fogaado wax kasta oo miyirka ka qaadi kara sida mukhaadaraadka, qaadka jaadka , khamriga, iyo wixi la mida, waxyaabahaasi oo sidoodaba xaaraan ka ah qofka Muslinka ah, si uusan u fasahaadin una burburin rajooyinkii xabiibtiisa oo dhaboobaya habeenkaasi, kuwaasi oo ah inay aragto gacalkeeda oo intuu ku soo dhoweeyo waji furan, u ximbaara xaggaa iyo sariirta.
Waa inuu ka ilaaliyaa inay ku baraarugto nin cabsan oo dhac-dhacaya, kuna soo socda isaga oo aalkolo iyo khamri ay ka soo urayaan, afkiisana ay ka soo baxayaan ereyo aan dhegaha u roonayn, halkaasina dabeeto ay kaga qaraxdo quraaraddii rajadu.
Kolka labada caruus ay ka tagaan goobta waliimada una baqoolaan xaggaa iyo gogoshooda, waxa ninka waajib ku ah inuu u dhaqmo si xilkasnimo ku jirto.
Waa inuusan hilmaamin in xafladdu ay daalisay jirka ooridiisa cusub. Maalinta aqalgalku waxay farxad u tahay labada qoys, ehelada kale iyo asxaabta oo dhan, ha yeeshee daal bay u tahay labada aqalgelaya, iyada oo weliba inta badan xafladda la qabto qorrax dhac kadib.
Waxa habboon in ninku uusan ugu deg-degin firaashka sidii isaga oo xiso waxbarasho dhaafaysa ka gaarsiinaya. Waa inuusan ku degdegin furitaanka hadiyadda loo keenay. Ninyahaw noloshaada guur ha ku billaabin kufsi. Ha degdegin; saacado, maalmo iyo sanado badan baa ku horyaal aad sidaad doonto u raaxeysan karto e. Waxaan ula jeedaa, uga sheekee jacaylka aad u qabto iyo quruxdeeda, isuna ahaada sidaad isu ahaydeen habeen ka hor, si ay gacaladaada ugu soo noqoto degganaantii una dareento ammaan iyo nabad-gelyo, wax walibana waad heli doontaaye tartiibso.
Waa inay aroosaddu heshaa xorriyad buuxda oo ay dharka iskaga beddesho, waana inuusan u soo gelin ninkeedu ilaa ay sariirta ka tagto. Waa inuu isagu dharka iskaga soo beddelaa qol kale amaba suuliga. Aroosaddu waa inay soo xirataa dhar khafiif ah oo laga dhex arkayo jirkeeda furitaankiisuna uu sahlan yahay sida guntiinada oo kale, si ay u soo jiidato ninkeeda, laakiinse looma baahna inuu isagu soo qaato dhar khafiif ah, ama xayto, amaba is-qaawiyo, taasi oo ka didinaysa xaaska habeenka ugu horreeya.
Waxa laga yaabaa in gabadhu kolka ay aragto jirka ninka oo qaawan uu u cuntami waayo, oo sidii ay filaysay iyo sida dhabta ahi ay kala fogaadaan sida geedkiisa oo aad u weyn ama jirka ninka oo dubkiisu uu aad u jilicsan yahay, ama tin fara badan leh amaba ay aafo ku taal.
Waxyaabaha ay gabadha bekrada ahi aadka uga xumaato, nafteedana dhaawaca waxa ka mid ah, ninka oo jirkeeda u qaawiya si ula kac ah, sababta oo ah waxa lagu barbaariyay inay is-asturto ama ay cawradeeda hoose sida naasaha, caloosha iyo xubinta taranka qarsato, sidaa awgeed ninka oo goobahaasi mar qura daboolka ka rogaa, gaar ahaan kolka uu isagu dharkiisii weli qabo, waxay gabadha ku dhalinaysaa xishood iyo inay ka xumaato, dareentana in ninkeedu ula dhaqmayo sidii inay dhillo tahay oo uu rabo inuu ka dhamaysto oo qura.
Waxa kale oo loo baahan yahay in ninku uusan gacmihiisa gabadha dharka oo dhan kaga dhigin, sababta oo ah waxay u haysataa in dharku uu asturayo wax aan loo baahnayn in indhaha ninku ay arkaan, oo ah ceeb jirkeeda ku taal.
Haddaba waxa ninka la gudboon inuu ooridiisa cusub u daayo habeenka koowaad inay iyadu dharka iska dhigto ama iska beddesho, welibana waa in uu tagaa meel aanay ka arkayn markay dharka iska saarayso si uusan uga xishoodsiin.
Kolka uu kalsoonidaasi kasbadana wax dhibaato ah kala kulmi maayo inuu siduu doono wax yeelo. Kolkii gabadhii loo aqal geeyay buu ninkii habeenkii koowaad ku billaabay habab galmo aanay u dulqaadan karin, weligeedna aanay ku riyoon inay la kulmi doonto.
Habeen labaadkii gabadhii waxay iska tuurtay daaqaddii guriga oo ka koobnaa dhowr dabaq, iyada oo geeri ka door bidday waxyaabaha uu ninkeedu kula kacayo oo in la qariyaa ay ka roon tahay sheegistooda. Gabadhii waa la guursaday iyada oo raalli ka ah, ha yeeshee aan nolosha guur waxba ka garaneyn. Habeenkii aqalgalka ayuu ninkeedii amar ku siiyay inay isdhiibto, saa waa ay diidday iskuna dayday inay iska caabbiso, dabeetana ninkii baa sidii dugaaggi oo kale u soo weeraray, si uu u helo waxa uu u haysto inuu xaq iyo sharciba u leeyahay.
Gabadhii intay xanaaqday ayay billowday inay jejebiso alaabadii qolka taallay inta ay ka gaartay, kolkaasi buu dadkii hoteelka degganaa soo kala yaacay oo intii ay gabadha dhakhtar u dooni lahaayeen, u dalbeen ciidanka booliska, kuwii oo iyana intay qabteen oo xirxireen u gudbiyay cusbitaalka dadka waalan. Haweeneydiisii oo ku kortay dhowrsanaan buu ka soo horbaxay isaga oo qaawan oo sidii Eebbe u abuuray ah. Gariir xoog leh iyo argagax bay gabadhii ku dhalisay aragtidaasi naxdinta lihi, waxayna billowday inay isdifaacdo, isagiina isku deyay inuu weeraro oo qabsado, balse wax guul la taaban karo ah sooma uusan hoyn, inkasta ooy libintu dhankiisa u badnayd.
Kolkii uu ogaaday inuusan halkaasi koob biya ah ka kabbanaynin buu qolkii oo la moodo goob legdan dib uga gurtay isaga oo caydu afkiisa ka fanfaniinayso, degayna qol kale.
Subaxdii ayuu soo laabtay si uu quraac u helo, waxase lagu salaamay quursi, yasmo, diidmo, iyo wixi la mida.
Waxa ugu muhiimsan ee habeenkaasi dhacayaa waa bekra-jebinta. Bekradu waa xuub ama dub khafiif ah oo ku dahaaran afka hoose ee cambarka, waxaana ninka waajib ku ah inuu dillaaciyo ama ballaariyo xuubkaasi kolka ugu horreysa ee uu dhalfada gelinayo cambarka. Waxa jirta in hablaha boqolkiiba ilaa boqolkiiba xuubkooda bekradu aanu dillaacin balse uu ballaarto, iyada oo ay dhalfadu si xoog leh ku dhex marto xuubkaasi ballaartay.
Xuubku waxa uu markaasi dhalfada u qabsanayaa sida laastiigga oo kale, halkaasina haweeneydu waxay ku dareentaa xoogaa xanuun ah oo ay macaani ku dheehan tahay. Ka hadli mayno gudniinka fircooniga ah iyo gabadha la tolay, balse waxannu ka hadleynaa hablaha bekradii Eebbe u sameeyey qaba. Mar kasta oo ay dhalfadu sii ballaariso xuubka caynkaasi ah, xanuunku waa uu sii yaraadaa, sidaasi buuna ninku geedkiisa si fudud muddo kadib cambarka ku geliyaa isaga oon wax dillaac ah u geysan.
Kolka ay galmadu badato si toos ah buu xuubkaasi u kala tagaa isaga oon wax dhiig ahi ka imaan amaba xitaa xanuunin. Ragga khibraddoodu ay yar tahay qaar baa u haysta in bekra-jebintu ay u baahan tahay xoog, kana shakiya awooddooda sidii iyaga oo ku jira ciyaar kooxeed, cabsidaasi oo dhibaato nafsiyadeed ku abuurta habeenka aqalgalka. Haddaba xaqiiqdu waxa weeye in bekra-jebintu aanay u baahnayn xoog, ha yeeshee ay ku filan tahay oo qura geedka ninka oo kaca dhalfaduna adkaato oo taaganto.
Haddii gabadhu ay tahay mid aqoon yar, cabsi badan, kana baqaysa bekra-jebinta, waxa ninka waajib ku ah in aanu isku deyin in uu xoog kaga dusiyo geedkiisa, gaar ahaan hadduu geed weyn yahay sahalna aysan ahayn inuu cambarka dhex-maro, balse waa inuu u dib dhigtaa ilaa berrito kuna kaaftoomaa istiimin iyo salaaxid, si uu u soo dhoweeyo xabiibtiisa.
Kolka uu taasi ku guulaysto, waa inuu furista albaabka xiran u billaabaa si xariifnimo ku jirto, isaga oo isku deyaya ballaarinta xuubka bekrada, kana dhaadhicinaya aroosaddiisa in xanuunku uusan ahayn mid laga baqo, afka uu furayna uu yahay mid ku filan inuu si sahal ah geedkiisa ku geliyo. Waa inuu billaabaa gelinta dhalfada, isaga oo raacinaya niiko fudud, waana inuu xoogga saaraa inta u dhaxaysa labada bushimood ee yaryar xuubkooda ku beegan bartamaha cambarka, dabeetana gacaladiisa afka afka u geliyaa oo dhunkasho iyo dhuuqmo ku billaabaa, daqiiqado kadibna si toos ah u geliyaa geedka.
Markaasi qaylo ayay ku dhifataa, neef ay ku dheehan tahay oohin iyo farxadna neefsataa, kuna soo geba-gebeysaa dhoola caddeyn, waa guul. Haddii gabadha uu dhiig badani ka yimaado, taasi oo mararka qaar dhacda, waxa waajib ku ah inay intay dhabarka u seexato, ay labada cajar isku dhejiso, iyada oon waxba isdhaq-dhaqaajin, markaa isaga ayaa iskii iskaga joogsanaya, waana inaanay isku deyin inay joojiso amaba dhiiggaasi tirto. Waxaa marmar dhacda in xuubka bekradu uu adag yahay oo aanu ninku si fudud ku dillaacin karin, waxaana loo baahan yahay markaasi in aan xoog lagu dayin, oo intii aynu maqli lahayn qaylo iyo oohin ay habboon tahay in dib loo dhigo ilaa habeen dambe, haddiise arrintu adkaato waa in loo geeyo dhakhtarad ku takhasustay cilmiga haweenka, si ay qalliin bekra-jebin ah ugu sameyso.
Waxay ahayd gabar caato ah, midab boor ah leh, aadna u bar yar, oo ruuxii eegaa u malaynayo inay ilmo laba iyo toban jir ah tahay. Waxaan ugu horreyntii u qaatay inay raashin xumo sidaan u gashay, ha yeeshee waxa iga shaki siiyay jirkeeda aad mooddo inuu dhiig caddaad qabo oo boorka leh, waxaanan is iri armay dhiig sumow qabtaa. Markii aan dharka ka dhigay waxa ii muuqatay caloosheeda buuran. Waxaan markaasi baaray ilma-galeenkii, saa dhabtii baa qorraxda ka caddaatay oo aad iiga nixisay.
Cambarka waxa ku dahaaran dub dhumuc weyn oo balaastiig ah, kolkii aan farta ku riixayna si sahal ah u duusmay, waxayna farteeydu ku sigatay inay gaarto luqunta ilma-galeenka oo uusan u dhexeyn wax aan xuubkaasi ahayni.
Kolkii aan xuubkii bekrada dillaaciyay waxa oodda soo goostay dhiigii duugga ahaa oo is urursaday, gabadhii markaas bay miiskii ay dul saarneyd uga toostay sidii iyada oo markii ugu horreysay ka soo nabdoonaatay cudur ku raagay. Waxa isna jira xuub bekro daloolkiisu uu laab-laaban yahay, kana ballaar badan yahay kan koobaabinta ah, geedka ninkuna uu geli karo isagoon wax dillaac ah u geysan, gaar ahaan hadduu geedku ka dhumuc yar yahay sida caadiga ah.
Waxa kale oo isna jira nooc xuub bekro daloollo badan leh sida shaqshaqa oo kale, kaasi oo kolka galmadu dhacayso si sahal ah u dillaaca isaga oon keenin wax dhiig bax iyo xanuun ah toona.
Waxa intaa dheer hablo dhasha iyaga oo xuubkooda bekradu aanu lahayn wax dalool ah sidaan hore uga soo hadalnay waase arrin naadir ah. Xuubka bekrada noocyadiisa waxa ugu badan, boqolkiiba, nooca jilicsan daloolkiisuna koobaabinta yahay. Boqolkiiba waa noocyada kale ee aan caadiga ahayn, waana in arrintaasi maanka lagu haayo. Xuubka bekradu kama qaybqaato galmada wax shaqa ahna kuma laha, mana keeno wax raaxa ah, ha yeeshee waxa uu qiimo weyn u leeyahay nolol bulshadeedka mujtamacaad badan oo dunidan ku nool.
Waxa dhacda in dalalka qaar gabadha qudha laga jaro hadduu dhiig ka soo yaaci waayo habeenka aqalgalka, iyada oo looga aar-goosanayo inay ku ciyaartay sharafteedii iyo tii eheladeeda intaba. Kolka laga soo billaabo waqti fog, xuubka bekrada oo nabad qabaa waxa uu ka marag kici jiray bekranimada gabadha iyo inaan weligeed loo tegin, suuragalna aanay ahayn inay uur qaaddo xitaa hadduu ka joogsado dhiigga caadadu.
Si haddaba looga ilaaliyo gabadhu inay bekra-jabto iyada oon bisayl gaarin, 16 illaa 18, waxay mujtamacaadka qaarkood u dejiyeen qawaaniin u diidaysa inay sameyso wax haba yaraatee lagu magacaabi karo galmo, xitaa hadday ahaan lahayd dhunkasho amaba taabasho xubnaha taranka dharka kor laga taabanayo.
Iyadoo taasi jirto bay misana hablaha magaalooyinku gabarnimadooda bekranimadooda ku waayaan kacsi labboodnimo iyo raaxo jinsiyeed raadin aawadood, ama ay siraan dhallinyaro u ballan qaadda inay guursan doonaan, amaba jacayl been ah u dhisa, dabeetana kolka ay muraadkooda ka gaaraan qashin-qubka iskaga tuura una horseeda sharmuutanimo.
Si kastaba arrintu ha ahaato ee looma baahna in xuub bekro kasta oo dillaaca loo qaato inuu ku dillaacay galmo. Sidoo kale looma baahna in nabad-qabka xuubka bekrada loo qaato looguna dhaarto in gabadha lihi ay bekro tahay.
S: waxaa ey sugeeysay Xanuun kale oo ah Bikro Jabinta sharciga ah, taa oo ey ugu dul qaadneeysay, Sharfka iyo in ey Hooyo Noqoto.
Inkaar qabe, Haween kufsade, waxaad baabinee Mustaqbalka Qof dhan. Bikra nimadu waa sharaf lagu xushmeeyo Gabdhaha Mujtamacyada oo dhan. Kufsigu Jirhaan iyo Nafsi ahaanba waxa uu ku reebaa Xanuuno joogta ah.
Beryahaan waxaa ku soo batay Dalkeena Somaliya kufsi Saqiira suujis ah, Haweeneydu uma adkeeysato Xanuun kufsi oo sharaf dhac u keeno. Kufsiga Xoogga ah ayaa keena in ey is disho iyada oo ceeb ka cararee ama u dhimato xanuun ama ka qaado Cudur Nafsi ah sida waalida. Bikranimada Raggu ma ahan muhim, Jir ahaanna lama Cadeeyn karo. Laakiin waxaa soo baxday in aan dhammaanteen khaldanayn.
Waxaan ogaanay waa in sheekada caanka ah ee la inooga sheegay bikranimadda haweenka ay ku salaysan tahay labo khuraafaad. Sidaas oo ay tahay runta dhabta ah ee bikronimada haweenka ma ahayn wax ka qarsoon culumadda caafimaadka muddo gaaraysa boqolaal sano. Hase yeeshee, labadaan khuraafaad waxay sii wadaaan inay nolosha ku adkeeyaan dumar badan oo ku nool dunidda dacalladeeda. Hadda waxaa laga yabaa in ay u muuqato arrin yar oo qaar idinka mid ah is waydiinayo maxaad ugu mashquulsan tahay maqaar yar oo kamid ah jirka haweenka?
Laakiin runtaa waxay tahay arintani waa mid aad uga ballaaran isfahan darro ka dhalatay xuubkaas yar. Khuraafaadka ku saabsan xuubkaan ayaa ah mid noolaa oo soo jiray qarniyo sababtoo ah waa mid ahmiyad dhaqan leh.
Waxaa loo adeegsatay sidii aalad awood badan leh taas oo lagu xakameeynayo galmadda dumarka. Khuraafaadkan ayaa ka helaaysaa ku dhawaad dhaqan kasta, diin kasta iyo taariikh kasta.
Meelo badan oo dunidda dacalladeeda ah haweenka aan bikroda ahayn ayaa la kulma dhibaatoyin kala duwan: Sidda ceebayn, wax yeelayn, kiisaska ugu xun ee loo gaysto ayaa ah dil sharafeed hadii aysan gogosha dhiig ku daadin habeenka arooska. Haweenka qaar ayaa lagu khasbaa baaritaano bikronimo si ay u helaan shaqo oo ay bulshadda sumcad ugu lahaadaan ama ay loo guursado. Tusaale ahaan waddanka Indooniisiya, halkaas oo haweenka si nidaamsan loogu sameeyo Virginity check marka aay galayaan qaar kamid ah adeegga milatariga.
Taasi waxay noqon kartaa qalliinka Plastic surgery-ga ah oo loo yaqaan Revirgination; kaas oo ah dibudhiska bikranimada ama bikro celin wuxuu noqon karaa xuub been ah oo loogu talo galay dhiig bax taas oo kuu fududaynasa inaad ahaato gabar bikro ah oo sharaf leh.
Waxaa yaraatay fursadahooda iyo xorriyadoodda, waa wakhtigaan joojin lahayn khiyaamada bikrada. Yaanu kaa dareemin murugo iyo in guurka uu ku guursaday aawgii aad reerkaagii uga soo fogaatay, illayn isaguba waxa uu ka soo tegay gurigii aabbihii iyo reerkiisiiye.
Ha yeeshee farqiga idiin dhexeeya adiga iyo isagu waa uun farqiga u dhexeeya nin iyo naag oo naagi mar waliba waa ay ka beer jilcan tahay kagana xiiso badan tahay ninka xagga waalidkeed iyo gurigii ay ku dhalatay, ku barbaartay waxna ku baratay.
Waa inaad la qabsataa nolosha cusub iyo ninka cusub oo laga billaabo maanta noqday ninkaagii iyo meat goat profit calculator aabbohood. Ku oran maayo iska illow aabbahaa, hooyadaa iyo walaalahaa, haddaad adigu illowdana iyagaanba ku illoobi karin, waxanse kaa codsanayaa in aad ninkaaga jeclaatid, isu qurxisid, isagana u joogtid, weligaana maandhey iska ilaali masayr haddii kale furriin meel kuuma jiro.
Ha farxin isagoo murugeysan, hana ismurjin isagoo faraxsan. Marka aan leeyahay fikrad kama wado tijaabooyin hore oo ay soo martay, balse waa fikrad cilmiyeed la soo baray loogana soo sheekeeyay. Waxaa dhacda inay hablaha qaarkood ka baqaan inayba kala dillaacaan habeenkaasi. Bekra-jebinta waxaa la socda xanuun yar oon micne lahayn, watana macaan illowsiisa cabsida oo dhan.
Waxaan oran karnaa maba jiro wax xanuun lagu tilmaami karaahi haddii aynaan annagu arrinka buunbuuninayn, siinaynna ahmiyad ka weyn tan uu mudan yahay.
Waxa waajib ku ah gabadha inay isugu diyaariso guurka si qalbi furnaan leh, sababta oo ah habeenka aqalgalku waa hadafkeeda koowaad waxaana ku xiran mustaqbalkeeda oo dhan. Gabadha si wanaagsan u xulatay gacalkeedu maba aha inay cabsato, balse waa inay si kalsooni ah xabadkiisa isugu tuurtaa una dhunkataa iyada oo u diyaar garoobeysa inay la midowdo laga billaabo saacaddaasi ilaa iyo intay nooshahay.
Dabcan gabadha caynkaasi ah ee farxad iyo laab furnaan ku soo dhoweysa habeenkeedu way hilmaantaa xanuunka aan wax la sheego lahayn ee la socda bekra-jebinta. Waxa laga yaabaa in gabadhaasi ay sanado badan daawan jirtay kana qaybgeli jirtay aqalgallo, akhrisanaysayna buugaag ku saabsan guurka, kuna riyoon jirtay farxadda iyo raynraynta sugaysa, waana tanoo rajooyinkeedii gabarnimo maanta waa ay dhaboobayaan, waxaanay dareemeysaa in halyeygeedan ay jeceshahay uu yahay kan leh jirkeeda, haddana waxa aanay ka dhamayn baqdin dumarnimo.
Diinteenna Islaamku waxay qabtaa in kolka aroosadda aqalka la soo geliyo, intuu ninku madaxeeda gacanta ka saaro uu ku ducaysto in Ilaah khayrkeeda iyo barakadeeda waafajiyo, waxay xumaan leedahayna ka badbaadiyo. Amarka ugu horreeya ee ay habboon tahay inuu ninku xaaskiisa cusub siiyaa waxa weeye inay laba rakco oo salaad ah ku xirato, ayna ku ducaystaan in Ilaah isu barakeeyo, carruur nfs heat pc qabtana kala siiyo.
Ninka habeenka aqalgalka waxa waajib ku ah inuu ka fogaado wax kasta oo miyirka ka qaadi kara sida mukhaadaraadka, qaadka jaadkakhamriga, iyo wixi la mida, waxyaabahaasi oo sidoodaba xaaraan ka ah qofka Muslinka ah, si uusan u fasahaadin una burburin rajooyinkii xabiibtiisa oo dhaboobaya habeenkaasi, kuwaasi oo ah inay aragto gacalkeeda oo intuu ku soo dhoweeyo waji furan, u ximbaara xaggaa iyo sariirta.
Kolka labada caruus ay ka tagaan goobta waliimada una baqoolaan xaggaa iyo gogoshooda, waxa ninka waajib ku ah inuu u dhaqmo si xilkasnimo ku jirto. Waa inuusan hilmaamin in xafladdu ay daalisay jirka ooridiisa cusub.
Maalinta aqalgalku waxay farxad u tahay labada qoys, ehelada kale iyo asxaabta oo dhan, ha yeeshee daal bay u tahay labada aqalgelaya, iyada oo weliba inta badan xafladda la qabto qorrax dhac kadib.
Waxa habboon in ninku uusan ugu deg-degin firaashka sidii isaga oo xiso waxbarasho dhaafaysa ka gaarsiinaya. Waa inuusan ku degdegin furitaanka hadiyadda loo keenay. Ninyahaw noloshaada guur ha ku billaabin kufsi. Ha degdegin; saacado, maalmo iyo sanado badan baa ku horyaal aad sidaad doonto u raaxeysan karto e.
Waxaan ula jeedaa, uga sheekee jacaylka aad u qabto iyo quruxdeeda, isuna ahaada sidaad isu ahaydeen habeen ka hor, si ay gacaladaada ugu soo noqoto degganaantii una dareento ammaan iyo nabad-gelyo, wax walibana waad heli doontaaye tartiibso.
Waxa laga yaabaa in gabadhu kolka ay aragto jirka ninka oo qaawan uu u cuntami waayo, oo sidii ay filaysay iyo sida dhabta ahi ay kala fogaadaan sida geedkiisa oo aad u weyn ama jirka ninka oo dubkiisu uu aad u jilicsan yahay, ama tin fara badan leh amaba ay aafo ku taal. Waxyaabaha ay gabadha bekrada ahi aadka uga xumaato, nafteedana dhaawaca waxa ka mid ah, ninka oo jirkeeda u qaawiya si ula kac ah, sababta oo ah waxa lagu barbaariyay inay is-asturto ama ay cawradeeda hoose sida naasaha, caloosha iyo xubinta taranka qarsato, sidaa awgeed ninka oo goobahaasi mar qura daboolka ka rogaa, gaar ahaan kolka uu isagu dharkiisii weli qabo, waxay gabadha ku dhalinaysaa xishood iyo inay ka xumaato, dareentana in ninkeedu ula dhaqmayo sidii inay dhillo tahay oo uu rabo inuu ka dhamaysto oo qura.
Kolka uu kalsoonidaasi kasbadana wax dhibaato ah kala kulmi maayo inuu siduu doono wax yeelo.
Can i transfer money from my us bank reliacard
thoughts on “Bikro jabinta gabadha yar”
23.08.2021 at 01:22
27.08.2021 at 21:05
My virtual fleet reviews
Vudojin on Bikro jabinta gabadha yar